Sivana teboka 9.1 .X sy .Y - Geofumed
9.1 .X sy .Otika
Ny firesahana momba ireo zavatra toy ny "From", "Midpoint between 2 points" sy "Extension" dia ahafahantsika mahatakatra ny fomba ahafahan'i Autocad manondro teboka izay tsy mifanaraka amin'ny geometran'ny zavatra efa misy nefa azo avy aminy, hevitra izay nakan'ny programer nahazatra ny famolavolana fitaovana fanaovana sary hafa antsoina hoe "Saringan" Point izay azontsika sary an-tsaina.
Aoka hatao hoe manana tsipika sy faribolana roa teo amin'ny efijery ary tiantsika ny hifandray ny mahitsi- izay vertex voalohany ao amin'ny Y mpiray mifanojo amin'ny ivon'ny faribolana lehibe indrindra eo amin'ny X mpiray sy ny sisa fotoana farany ny tsipika. Midika izany fa ny teboka voalohan'ny angady dia mety ho toy ny teboka roa amin'ny zavatra roa, fa tsy manohina ny rehetra.
Ho fanararaotana ny fanondroana ireo zavatra ho fampidirana ireo soatoavina amin'ny zona X sy Y tokana dia mampiasa ny "sivana Point" isika. Miaraka amin'ireo sivana ireo, ny toetra geometrika amin'ny singa iray - afovoan-boribory iray, ohatra - dia azo ampiasaina hamaritana ny lanjan'ny X na Y amin'ny teboka iray.
Andao hiverina any amin'ny faritra mahitsizoro, ny tsipika ary ireo boribory eo amin'ny efijery. Nilaza izahay fa ny zoro voalohany amin'ny zoro izay angatahan'ny varavarankely baikon-tsofina momba ny fifandrindrana ao amin'ny mandrindra X miaraka amin'ny faran'ny ankavia amin'ny zoro, koa ao amin'ny varavarankely ny baiko dia hanoratra isika hoe ".X" hanondroana fa hampiasa dikan-teny ho an'ny zavatra nefa raha tsy hanondro afa-tsy ny lanjan'io kofehy io. Araka ny efa voalaza, ny lanjan'ny coordinate Y dia mifanentana amin'ny afovoan'ilay faribolana lehibe. Raha te hampiasa io sivana io dia ampiasao ny fanondroana amin'ilay zavatra, tsindrio ny ".Y" ao amin'ny varavarankely baiko. Ny zoro mifanohitra amin'ny zoro dia mifanandrify amin'ny eziny X miaraka amin'ny faran'ny andalana hafa, fa eo amin'ny axisiny Y misy afovoan'ilay faribolana kely kokoa, dia mampiasa ny fomba fanivanana mitovy hevitra izahay.
Matetika, angamba fotsiny isika mampiasa ny sivana sy ny teboka momba ny zavatra ihany no mandrindra ny X sy Y mandrindra manome tanteraka na tena sarobidy X sy Y. momba sivana Na ahoana na ahoana, ny fampiasana mitambatra Ny sivana sy ny fanondroana ireo zavatra dia mamela antsika hanararaotra ny toerana misy ireo zavatra efa misy, na dia tsy mifantoka na mifanohitra tanteraka amin'ny teboka misy azy ireo izy ireo.
Previous Post«Previous TOKO 9: FITSIPIKA NY FANDINIHANA
Next Post TOKO 10: FAMPIASANA NY FITSIPIKA NY FIFANEKENAmanaraka »